ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): သင် ဘာကြောင့် သမ်းတာလဲ? ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): သင် ဘာကြောင့် သမ်းတာလဲ?
သင် ဘာကြောင့် သမ်းတာလဲ?
လူတွေ ဘာကြောင့် သမ်းတာလဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာ သမ်းကြလဲ?
အများအားဖြင့် အိပ်ချင်တဲ့ အခါ သမ်းကြ တယ်လို့ ယူဆကြပြီး ဘာကြောင့် သမ်းတာလဲ ဆိုတာတော့ သိသူ နည်းပါတယ်။ တကယ်တော့ သင့်ခန္ဓာ ကိုယ်ထဲမှာ အောက်ဆီဂျင် နည်းလာတဲ့ အခါ သင့်ပါးစပ်ကို ကျယ်ကျယ် ပွင့်စေပြီး လေတွေကို ပိုများများ စုပ်ယူဖို့ ကြိုးစား ပါတယ်။ ရှူသွင်းဖို့ ကြိုးစားတယ်၊ ဒါကို သမ်းတယ်လို့ သိထားကြတာပါ။
သမ်းတာဟာ သင့်ရဲ့ သွေးထဲမှာရှိတဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့ အောက်ဆီဂျင်တွေရဲ့ ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ နည်းလမ်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး အစာစားပြီးတဲ့အခါမှာလည်း သမ်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ သမ်းတာလဲဆိုတော့ သင်စားသုံးလိုက်တဲ့ အစားအစာတွေကို အစာအိမ် အူမကြီးတွေက အစာခြေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အပူနဲ့ စွမ်းအင်အတွက် အောက်စီဂျင် များများလိုပါတယ်။
အောက်စီဂျင် များများရဖို့ သမ်းရတာ ဖြစ်တယ်။ တခါတလေ လူအများကြားမှာလည်း သမ်းတတ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အောက်စီဂျင်တွေ လူတိုင်းက ရှူသွင်းပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေ ပြန်ထုတ်တာများပြီး အောက်စီဂျင် မလုံမလောက်ဖြစ်ကာ အောက်စီဂျင်များများ ရဖို့လေကို များများစုပ်ယူရင်းနဲ့ သမ်းတာပါပဲ။
လူကြားထဲမှာ သမ်းချင်တာဟာ အောက်စီဂျင် မပြည့်ဝ တာ ကြောင့်ပါပဲ။
တကယ်လို့ သင်ဟာ သမ်းနေပြီ ဆိုပါတော့…၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က အောက်စီဂျင် ပြည့်ဝဖို့ လိုအပ်နေပြီဆိုတာ သတိပြုပါ။ အောက်စီဂျင် မြန်မြန်ဖြည့်ဆည်းပြီး အားပြည့်ဖို့ လက်တန်းပါတဲ့ ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ကိုယ်ကို စန့်အောင် ဆန့်လျက် အသက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း အဆုတ်အပြည့် ရှူသွင်းပါ။
(သို့မဟုတ်) အိပ်ယာပေါ်မှာ လဲလျောင်းရင်း ကိုယ်ကို စန့်လျက် အသက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း အဆုတ်အပြည့် ရှူသွင်းပါ။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ရှူထုတ်ပါ။
ရှူသွင်း ရှူထုတ် ၅ ကြိမ်လောက် လုပ်မိပြီဆိုရင်တော့ အောက်စီဂျင်ပြည့်ဝပြီး ပြန်လည် လန်းဆန်းလာမှာပါ။
Originally published at - http://burma.irrawaddy.com/lifestyle/2016/04/02/111647.html